म हु पश्चिमको छोरो– कन्हैया सिंह | Bardiya Online
| प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार १२, २०७१ ::: 286 पटक पढिएको |
नेपालगन्ज घरवारीटोल २ मा बस्दै आएका चर्चित गायक कन्हैया सिंह पछिल्ला दिनहरुमा अमेरिका बस्दै आउनु भएको छ । अमेरिका बसेपनि उहा“बेला बेलामा जन्मस्थान नेपालगन्जमा आईरहनुहुन्छ । यस्तै नेपालगन्जमा पारिवारीक भेटघाट गर्न आएको बेला उहा“को अमेरिका बसाई र उहा“को गित संगितको अनि भर्खरै मात्र सम्पन्न म्युजिक खबर म्युजिक अवार्डका बारेमा पत्रकार खगेन्द्र दहालले उहा“संग गरिएको कुराकानी :
कन्हैया जी सन्चै हुनुहुन्छ ?
सन्चै छु । बागेश्वरी माताको आर्शिवाद र तपाईहरुको मायाले अहिलेसम्म राम्रै भएको छ ।
एक्कासी नेपालगन्ज आउनु भयो विशेष कारण के थियो ?
त्यस्तो विशेष कारण त केही थिएन म व्यक्तिगत पारिवारीक भेटघाट गर्न नेपालगन्ज आएको हु ।
तपाई त अमेरिका परिवार सहित बस्नु हुन्छ है ?
हो । अमेरिकामा बस्छु । विगत केहि बर्षदेखि अमेरिका तथा नेपालमा आउने जाने गरिरहेको छु ।
अमेरिका प्रति तपाई जस्तै अन्य कलाकारको मोह किन बढेको होला ?
अमेरिकाप्रति कलाकारका मात्र होइन संसारको मोह बढेको छ किनभने अमेरिका यस्तो देशहो जो मानवअधिकार, मानवहरुको समबेदना र मानवलाई दिने अधिकार छ जुन संसारमै हरेक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ अमेरिकामा कुनै पनि मान्छेले मान्छे भएर सम्मान दिने ठाउ“ अमेरिका हो । त्यसले गर्दा राजनितिज्ञ, समाजिक सेवामा लाग्नु भएका तथा कलाकारहरु पनि आकर्षक बढनु स्वाभाविकै हो ।
अमेरिका गएपछि कलाकारहरु किन नेपाल फर्कन मन गर्दैनन् ?
फर्कन चाहदैनन भन्ने कुरा त आ–आफ्नो सोचको कुरा हो । फर्किने नफर्किने भन्ने कुरो त के लाग्छ भने त्यहा“को सेवा सुविधा नै त्यस्तो प्रकारको छ । र त्यहा“को व्यवस्था नै फरक रहेको छ । त्यहा“ गैसके पछि त्यहा“को सिस्टमले मान्छे बाध्ने गर्छ । त्यसले गर्दा बा“धिन्छन् । तर पनि म चाही अमेरिका गएपनि फर्की रहेको छु । तिन महिना त्यहा“ बसे भने ६ महिना नेपालमा बस्छु । नेपालबाट गायनको प्रतिनिधित्व गर्दै २००८ मा गएको हु । बेला बखतमा अमेरिका गईरहन्छु । नेपाल आमाले मलाई राष्ट्रिय गायकको रुपमा जुन परिचय दियो त्यही परिचयले गर्दा अमेरिका सरकारले मलाई त्यहा“ जानका लागि भिसा उपलब्ध गरायो । म नेपालगन्जको छोरो अहिले काठमाण्डौं हुदै अमेरिकासम्म गाउनलाई पुगे । अमेरिका भन्दा म नेपालमै बस्न गर्ब गर्छु ।
के अमेरिकामा बस्ने कलाकारहरुलाई डिभी परेरै बसेका हुन् ?
होईन डिभी परेर होइन जहा“सम्म मलाई लाग्छ डिभि परेर अमेरिकामा बसोबास गर्ने एक जनामात्रै कलाकार हुनुहुन्छ । उहा“ मोहन भुषाल पुरानो पप गायक हुनुहुन्छ । कतिपय कलाकारहरु कार्यक्रमकै भिजाबाट जानु हुन्छ कोही प्रिथ्री भिजाबाट जानुहुन्छ । कोही लुकीछिपि बस्नु हुन्छ ।
कार्यक्रममा अमेरिका पुगिसकेपछि कलाकारहरु लुकिछिपि त्यही बस्ने चलन पनि छ रे के हो ?
 (हास्दै) ………..बास्तावमै एकदमै समसामायिक प्रश्न गर्नुभयो खगेन्द्र जी यस विषयमा भन्नु पर्दा बास्तावमा संसारले नै मानेको अमेरिका जहा“ हरेक कुरा सिस्टममा छ कानुन छ , सुरक्षा छ, काम कुरो व्यवहार राम्रो छ ,मान्छेको रोजगारको सुरक्षित छ, त्यहा“ बस्ने कलाकारहरु कतिपय आफ्नो भावि सन्ततीको लागी बस्नुहून्छ । उहा“हरुले यसरी बस्दाखेरी मैले पापै गर्नुभो चाही भन्दिन् ।
अमेरिकामा कलाकारले नाम पाउ“छन कि दाम ?
मुसुमुसु हास्दै भन्नुभयो,“ तपाईले एकदमै सहि कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यहा“ नाम त छैन तर दाम चैं छ । कलाकारले एउटा कार्यक्रम गर्न पायो भने थुप्रो पैसा कमाउ“छ । नाम नभएपनि माया हुन सक्छ ।
त्यहि त दामकै कारणले गर्दाहोला है नेपाली कलाकारहरु धेरै अमेरिका तानिनु भाको ?
त्यही हो अब दामले पनि हो । थप के छ भने सुरक्षा, अधिकार, त्यहा“ कोई मान्छेले कसैलाई हेप्न पाउ“दैन । सबैको धर्मलाई सम्मान गर्ने हुनाले त्यहा“ त्यो किसिमको महत्व छ ।
तपाईका गित संगितका कुरा गरौं, पछिल्लो समय आलाप २ बजारमा ल्याउनु भयो, निकै चर्चा छ है ?
चर्चा त छ, मलाई माया गरिरहनु भएको छ । श्रोता, दर्शक तपाईहरु जस्तो पत्रकारज्युहरुले किनभने मेरो गित संगितको क्षेत्रमा पनि दुई दशक पुग्न लाग्यो । १५ बर्ष त मैले व्यवसायीक गायनको रुपमा काम सुरु गरे । रेडियो नेपालमा २०५५मा स्वर परिक्षा पास गरिसकेपछि आधुनिक गायन तर्फ लागे । त्यसपछि लगातार अभिछिन्न रुपमा गायन तर्फ लागि रहे त्यसैको परिणाम मैले नेपालगन्ज बजारैमा २०५७ सालमा पहिलो गित निकाले । २०६० सालमा तिम्रो साथ बोलको गित गायिका अन्जना गुरुङसंग निकाले । पिरतीको फुल, अपेक्षा, अडियो कलेक्सन, त्यसपछि २०६६ सालमा मेरो एकल एल्वम आलाप ल्याए तिमले भुल्न सके पनि मैले भूल्न सकेन भो यो गित पनि धेरैले मन पराई दिनु भयो त्यसैको थप परिणाम स्वरुप आलाप २ सम्म आउ“दा खेरी आलाप २ ले जुन किसिमको चर्चा पायो । त्यसले झन उत्साहित बनायो ।
आलाप २ मा कति वटा गित समाबेश गर्नुभएको छ ?
आलाप २ मा ६ वटा गित छन् एउटा चै बोनसको रुपमा मैले राखेको छु । किन भने आलाप कै सिकवेल हो आलाप कै भाग भएको हुनाले बोनसको रुपमा राखेको छु साथै मन हुनेको मायार धनहुनेको मायामा के फरक पायो, मुटुमा कस्तो पिडा दिएर गयो, तिमिले त घात गरि, पश्चिमको छोरो र तिमीले भुल्न सकेपनि यो गितको समिश्रणले एउटा सुन्दर बगैचाको रुपमा रहेको छ ।
नेपालगन्ज चिनाउने कलाकार भनेर चिन्ने गरिन्छ नि यहा“लाई कस्तो लाग्छ ?
एक दम गर्भ लाग्छ किन भने जन्मे हुर्केको ठाउ“लाई गित संगितबाट म्युजिक भिडियोबाट नेपालगन्ज चिनाउन पाएको छु । नेपालगन्ज बजारमा धेरैमान्छे आउनु भएको त छैन त्यही गितले गर्दा उनिहरुलाई चिनाउने मौका पाए ।
पैसा कत्तिको कमाउनु भयो ?
पैसा भन्ने कुरा पछिल्लो समयमा केही कमाईयो, सिडी, सिआरबिटी, अडियोबाट कमाए ,सुरुवातको बेला पनि पैसा कमाए, तर जुन हिसाबले पैसा कमाउनु पर्नेहो गित संगितले त्यस किसिमको पैसा कमाउन सकिएन ।
तपाईको त परिवार नै गित संगित तिर लाग्नु भएको छ कस्तो छ भविष्य ?
अब भविष्य चाही मैले राम्रो देखिरहेको छु मैले १५/२० वर्ष गित संगितमा लगानी गरे अब यसको व्याजले रुखासुखा जिन्दगी विताउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
म्युजिक खवर म्युजिक अवार्ड अन्तरर्गत उत्कृष्ट पुरुष गायक सुगम संगित मार्फत राष्ट्रिय अवार्ड पनि पाउनुभयो नि कस्तो लाग्यो ?
वास्तबमा मेरो जिन्दगिको यो पहिलो अवार्ड हो । त्यो भन्दा अगाडी सम्मान, पुरस्कार मैले धेरै पाए“ तर अवार्डको रुपमा सबैलाई चुनेर ५ जना कलाकार एकदम टपटप कलाकार कन्हैया सिंहको गित पनि नोमिसन परेको थियो । नोमिसनमा पर्दै म एकदम खुसी थिए मैले २० बर्ष गरेको साधना ,तपस्या नेपाली आमालाई केही दिन सके । मैले आफ्नो जन्मथलोलाई पनि केही चिनाउन सके । त्यसैले गर्भ महसुस भएको छ । मुटुमा पिडा भन्ने गितले अवार्ड दिलायो, दर्दनाक दुखको गित भएपनि मैले सम्मान पाएको छु । मैले पिडा भित्र खुसी पाएको छु ।
अन्त्यमा, यहा“को आगामी योजना के छ ?
आगामी दिनमा मलाई धेरै साथीहरु,फ्यान,श्रोता, संचारकर्मी साथीहरुले यतिका बर्ष मैले प्रस्तुत गरेका गित संगितमा साथ दिनुभयो यसैकारण लोकप्रिय गित संगित पस्किदै आइरहेको छु । त्यस्तै कन्हैया सिंहको एकल सा“झ हेर्न पाएहुन्थ्यो भन्ने धेरै हुनुहुन्छ मेरो पनि एकल सा“झ गर्ने योजना छ र साथीहरुसंग पनि भेटघाट गर्दै आईरहेको छु । आशा छ सबै साथीहरुले साथ दिनु हुने छ ।